Akụkọ - companylọ ọrụ 3LTEX sonyere na Techtextile-Leading ahia ahia mba ofesi maka textiles teknụzụ na nonwovens
Llọ ọrụ 3LTEX sonyere na Techtextile-Na-eduga ahịa azụmaahịa mba ụwa maka textiles teknụzụ na nonwovens
Kwa afọ, ụlọ ọrụ 3ltex ga-esonye na nnukwu China na ngosipụta mba ụwa metụtara teknụzụ, nchekwa na ahụike.
Techtextil bu onye ndu ahia ahia ahia mba uwa na nke ndi n’etinyeghi akwa, ga-egosiputa uzo di iche iche nke teknuzu, akwa oru na teknuzu teknuzu na Techtextil. SmartTextiles - ma ọ bụ ihe ọgụgụ isi - na - ewere ụwa nke textiles site na mmiri ozuzo na ndị isi ụlọ ọrụ dịka 3L na - emepe ngwaahịa ọhụrụ nwere ike ịgbanwe ụlọ ọrụ ahụ.
Bolọ ntu nke 3Ltex (onye nrụpụta kachasị ọhụrụ na onye mepụtara teknụzụ) gosipụtara ọnọdụ China na teknụzụ teknụzụ teknụzụ. Mụtakwuo gbasara yarn ọgụgụ isi nke ụlọ ọrụ 3ltex, textiles na ihe ọhụrụ ndị ọzọ ebe a.
3LTEX ejiri nlezianya dozie ya, yana ikike mmepe ngwaahịa siri ike na ụkpụrụ ọrụ ọkaibe, yarn smart smart na akwa dị iche iche abụrụla ihe ọhụụ na ụlọ ọrụ ahụ.
Ọdịdị dị omimi na mkpokọta arụmọrụ na-arụ ọrụ nke igbochi ọkụ, nguzogide okpomọkụ dị elu, nrụpụta ọkụ, nrụpụta eletriki, antibacterial na antistatic dọtara ọtụtụ ndị ahịa nwere ike ịkwụsị, lelee ma kpaa nkata.
Ọtụtụ ndị ahịa ewetawo nsogbu ọrụaka zutere n'oge nhazi ahụ. Mgbe ntuziaka teknụzụ na njikarịcha usoro nke ndị injinia dị elu nke 3LTEX, ọtụtụ ndị ahịa nwere afọ ojuju na ebumnuche ịzụta ahụ ruru ebe ahụ.
Nke a bụ mmemme nke ụlọ ọrụ, kamakwa njem owuwe ihe ubi. Na ngosi a, anyị weghachitere ọtụtụ iwu na echiche bara uru sitere n'aka ndị ọrụ ikpeazụ na ndị enyi ndị ahịa.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, 3LTEX enwetawo nkwupụta dị larịị na nke kwụ ọtọ na smart yarn na ụlọ ọrụ akwa ndị nwere ọgụgụ isi, nwere nnukwu ọganiihu, otu ngwakọta ngwongwo na mmepe na-aga n'ihu.
Site n'inwe ike ịrụ ọrụ nke ọma, anyị etinyeworị ọnọdụ dị mkpa n'ọhịa nke obere yarns na akwa mara mma.
N'agbanyeghị nke ahụ, anyị maara na "enwere ụzọ dị ukwuu ịga."
Anyị ga-anọgide na-emeziwanye usoro nchịkwa, meziwanye usoro nke ụlọ 3L, jiri ezi uche chee ihu ahịa, ma mepụta ngwaahịa ndị ka mma iji jeere ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị ọrụ na ndị enyi.
Post oge: Jun-03-2019